Pual Pogba Oo Soo Xushay Shaxda Ciyaartoydii Ugu Fiicnayd Ee Uu Ka Garab Ciyaaray Iyo Hal Mid Oo Loo Arko In Uu Saaxiibtinimo Ugu Soo Daray. - Gool24.Net
Pual Pogba Oo Soo Xushay Shaxda Ciyaartoydii Ugu Fiicnayd Ee Uu Ka Garab Ciyaaray Iyo Hal Mid Oo Loo Arko In Uu Saaxiibtinimo Ugu Soo Daray.
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United iyo xulka qaranka France ee Pual Pogba ayaa soo xushay shaxda ciyaartoydii ugu fiicnaa ee uu ka soo garab ciyaaray laakiin hal xidig ayaa lama filaan noqday.
Pual Pogba waxa uu waayihiisa ciyaareed ku soo qaatay kooxaha Manchester United iyo Juventus waana sababta uu shaxdiisa ugu soo wada doortay 11 ciyaartoy oo uu kaga soo garab ciyaaray kooxaha Juve iyo United.
Pual Pogba ayaan ciyaartoyda uu ka soo garab ciyaaray ku darin xidigaha xulka qarankiisa France waxayna ku kooban yihiin ciyaartoydii ugu fiicnayd ee uu heerka kooxaha kaga soo garab ciyaaray.
Pual Pogba ayaa shaxda kooxda ciyaartoydii ugu fiicnayd ee uu ka soo garab ciyaaray waxa uu 7 ka mid ah ka soo xushay kooxda Juventus halka afarta kale uu ka soo qaatay Man United.
Laakiin halka xidig ee loo arkay in Pual Pogba uu saaxiibtinimo ugu soo darsaday shaxdiisa ee aanu fiicnaan ugu soo darsan ayaa noday Jesse Lingard kaas oo ay tan iyo carruurnimadoodii Man United soo wada joogeen.
Anthony Martial , Marcus Rashford iyo Evra ayaa noqday labada xidig ee kale ee uu Pual Pogba ka soo doortay Man United halka dhamaan xidigaha kale uu kaga soo garab ciyaaray Juventus.
Pual Pogba ayaa shaxda kooxda ciyaartoydii ugu fiicnayd ee uu ka soo garab ciyaaray waxa uu goolka u soo xushay Buffon oo uu waqti cajiib ah kula soo qaatay Juventus waxaana difaaca kuwada jira Chiellini, Bonucci iyo LIchtsteiner oo uu dhamaantood kula soo ciyaaray Juventus waxaana afarta difaaca ah dhamaystiray Evra.
Pogba ayaa saddexda khadka dhexe ka soo wada doortay ciyaartoydii uu Juventus kula soo ciyaaray waxayna kala yihiin Andrea Pirlo, Marchisio iyo Arturo Vidal.
Weerarka waxa uu Pual Pogba u soo wada doortay ciyaartoyda uu hadda Man United kala ciyaaro ee Anthony Martial, Marcus Rashford iyo xidiga lama filaannka shaxdan ku noqday ee Jesse Lingard.
Halkan kaga bogo shaxda kooxda ciyaartoyda ugu fiicnayd ee uu Pual Pogba ka soo garab ciyaaray ee uu soo xushay oo dhan:
15/05/2020 at 12:36 am
Dypala ayaa ku haboonaa inuu kusoo daro